Taxanaha Tahriibka. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
November 1 —FMN—Shabakadda Warbaahinta Feer-feer Media Network (FMN) waxa ay bilaabaysaa baahinta Qoraalo taxane ah oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay dhalintu kala kulmaan Suudalka(Tahriibka),kaas oo ujeedadiisa Koowaad ay tahay in;dadka looga wacyigaliyo qataraha uu dhaqankaas leeyahay,iyada oo loosoo tebinayo dhacdooyinka dhabta ah ee ay la kulmeen dadkii wadadaas maray.Waa taxane ay soo bandhigayaan dhibbanayaal rasmi ah oo aan metelaad iyo majaajilo toona ahayn.
In badan oo kamid ah dhalinta dhibaatooyinka baaxadda lihi ay kasoo gaadheen falka tahriibka ah ee ay ku kaceen,wali mayna helin madal furan oo ay si faah-faahsan ugu soo badhigaan dareenkooda dhabta ah ee ay arintaasi ka qabaan,si ay unoqoto diiwaan diyaarsan oo ay dib udaalacan karaan dadka danaynaya in ay si buuxda wax uga ogaadaan
Annaga oo taa ka duulayno ayaan go’ansanay inaan abuurno fursad ay dhibbanayaasha tahriibku ay dadka intiisa kale kula wadaagaan waaya aragnimada ay ka kororsadeen tahriibkii ay sameeyeen iyo wadammadii ay tageen waxii ay kala kulmeen ee dhib iyo dheefba leh.
Haddaba,Adigu Ma tahay qof ay waxyeelo kasoo gaadhay tahriibkii uu sameeyay?Maxay ahaayeen dhacdooyinkii u xummaa ee kusoo maray intii aad ku guda jirtay hayyaanka suudalka ama tahriibka?Maxaad la kulantay tahriibka kadib?Ma jiraan Talooyin aad uhaysid dadka wali ku hamminaya in ay wadadaas maraan?.tahriibka kahor maxaad ku taamaysay?.
Warcelinta weydiimahaas oo faah-faahsan iyo Waxii sawiro kuwaada ah oo aad heli kartid,waxa aad kusoo hagaajin kartaa e-mailka ah:-Tifaftirahaguud@gmail.com amaba haddii aadan ku wanaagsanayn qaabka loo curiyo sheekooyinka iyo Maqaalada waxaad nagalasoo xidhiidhi kartaa bogga aanu kuleenahay Facebook-ga ee Feer-feer Media Network.Anaga ayaa kaa sicdayna qaabka ugu habboon ee aad sheekadaada si farshaxamaysan ugu soo bandhi kartid.
Hooos Ka akhriso qoraal dheer uu kuu Iftiimanaya tahriibka iyo waxa uu yahay.
Suudal (Af-Ingiriis: Illegal immigration; Af-Carabi: هجرة غير شرعية ama تهريب) sidoo kale loo yaqaano Dhuyaal iyo Tahriib, waa socdaal qof ama koox dad ah sameeyaan kuwaasi oo ku socda deegaan kale oo ka duwan wadankooga si ay u helaan shaqo, dhaqaale, nabadgelyo, iyo nolol fiican. Inta ugu badan socdaalka noocan ahi waa mid sharci daro ah kaasi oo keena khatar iyo halis badan ooy ka mid tahay xadhig, dhac, kufsi, iyo dhimasho.
Suudalku waa socdaal aan ogolaasho loo haysan badiyaana dadku u qoraan qaab Af Soomaali ah oo ka soo jeeda Af Carabi. Erayga Tahriib wuxuu ugu batay Af Soomaaliga in dhulka la sii maro uu u badanyahay dhul Carbeed, inta u dhexaysa Suudaan ilaa iyo Liibiya oo ah halka badda looga sii gudbo Yurub. Socodkii waa tahriib, dadkii waa tahriibayaal, qanqaabiyaalkii waa tahriibiyeyaal oo marka dambe isku rogga magafe. kaas oo marka dambe dhuyaal socodka faramariya ama naftoodaba halis geliya. Suudal waa hayaanka inta badan ay ku talaabo qaadaan dad ka dhoofaya dhulkooda iyagoo sii marayo xaduudo ilaalsan ujeedkooduna yahay inay dhuumaalaysi iyo habayn guure ku maraan dhulkaas iyo xaduudadahaas ilaalsan.
Qofka u bareeraa socod suudal ama dhuyaal ah wuxuu ku tala galaa geeri iyo nolal inuu ka mirro dhaliyo socdaalkaas. Suudal waa isbiimayn socdaal kaas oo aan lahayn ammin go’an basle leh kalahaad ama jarmaad hore, guure, baqool ama dhalandhool, caroow iyo socod lug iyo wixii gaadiid la heli karo la dul saarnaado dharaar iyo habayn tan iyo inta laga gaarayo meelo astaamaysan oo gashiimaysi loogu sii nasto.
xarig cidii doonta ay iska xirato dadka ogolaasho la’aanta iska hayaamayo
Dhibaatada suudalka waxaa ay dhibaato raagto ku ridaan qofka, qoyska iyo qaranka uu ka socdaalay wiilka ama gabadha dhuyaalka go’aandsay. Dhul lama degaan ah, xaduudo la ilaalsanayo iyo bado la raaco doomo aan tayo lahayn oo inta badan dadka ku harqadaan ayaa u dambaysa qofka doorbiday socdaal suudal (tahriib) ah. Qoyska suudal socdaalaha ayaa maal aduun ku baxsho marka uu magafegacanta ku dhigo wiilkoodii ama gabadhoodii soo joog laga kari waayay.
Qaarada Afrika meelo badan oo ka mid ah ayay ka ambabaxaan dadka suudalka ku mara dhulka lama degaanka ah ee Suudaan ilaa Liibiya looga sii talaabo Yurub. Waxaa la isku raacay in dhulka la sii maro uu dhib badanyahay isla markaana dadka dhulalkaas ku dhaqan ay arxan daranyhiin. Waxaa wargaysyada Af Soomaaliga ku baxa iyo barraha Internet-ka laga dheehanayay waayahan dambe bulsho Soomaaliyeed oo tiro la’aan ah ugu rogmatay bad iyo beri intii ay ku gudo jireen hayaan suudal ah. Dowlad iyo dadwayne ehbiyay socdaalka suudalka ahna ma jiraan ilaa iyo maanta.
Previous Previous post: Wasaaradda Warfaafinta XFS oo Shir wadatashi ah ka furtay Muqdisho.
Next Next post: Wasaaradda Caafimaadka Ee DFS Oo Itoobiya Uga Mahadcelisay Gurmadkii Caafimaad Ee ay Ka Geysatay Qaraxii Zoobbe.